Mushonga wenhumbi wesimbi usingadzwi, mufambisi wechiFerrule macle mach mush mufekitari - China Boegger
Uri pano:Musha > Products > Security > Marudi>Mwenzi wetambo yesimbi isina simba
Mwenzi wenhema yorudzi rweFeruleIne zvinhu zvakafanana nezvemberi, asi mvura dzakasiyana - siyana dzinobatanidza tsamba dzakabatanidza pamwe chete kuti dzinoumba mvura yesimbi ine rhombus. Iyi mvura inochinjira nenzira yakanaka kugadzirwa dzako dzinodenha zvikurusa 3D uye kushandisa kwakasiyana - siyana nemhaka yokutevera betsimo:
L Ferrule mashoko: mhangura yakabatanidzwa, mhangura yakagadzirwa, simbi isina manya kana kuti aluminium.
L Cable mashoko: simbi rakakwirira risina simba AISI 304, 304L, 316, 316 L.
L Cable kuvaka: 7 × 7 (1.5 mm, 2 mm kana kuti 2,5 mm), 7 × 19 (3 mm, 4 mm)
L Diamond ukuru: 20 mm kusvika ku200 mm.
L Cable diameter: 1 mm kusvika 4 mm.
L Standard: kubvumirana nenyika dzose namabumbiro okuvaka enyika pakukumbira kwako.
Ini ipi neipi yakagadzirwa netsika zviri kuitika.
Mwenzi dzetambo dzisati dzatsva
Mwenzi dzetambo dzefurule pashure pokutamba
LUremu hwakasimba nokuchinja kukuru.Mativi:
Mhizha yensimbi isina simbi yakajeka, uye kufara kwayo, kureba, nhambo yetambo uye ukuru hwokuzarura kunogona kuchinjwa. Chii chiri kuwedzera, zvimiro zvechimiro nezvisingaitiki zvinowanikwawo. Naizvozvo mvura yesimbi isina simba iri nyore kuisa mumamiriro ezvinhu ipi neipi uye inoshandiswa zvikuru munzvimbo dzakawanda.
LSimba rakakwirira, risingazivi kuneta uye rinobatsira.
Mafurules anobatanidza ntambi yesimbi isina simba zvakasimba, zvichiita kuti mvura yacho ive yakasimba. Naizvozvo, mvura yensimbi isina simba ine mvura inodzivisa kuneta uye kusununguka.
Kuvakwa kwetambo 7 × 7 kana kuti 7 × 19, kuchiita kuti tsvene ferrule tsveve nyoro zvikuru. Naizvozvo, inogona kukwaniswa nokupetwa zviri nyore, izvo zvinokuita kuti zvisati zvazvinoita kutakura. Uye iyi nzvimbo inoitawo kuti zvive nyore kuisa. Kupfuura zvose, hazvizokuvadza maoko.
LZvakanaka zvikuru nokudzivisa ngura, zvinoshandiswazve uye zvinogara.
Mwenzi yensimbi isina simbi inoumbwa kubva ku304, 316, 304 L kana kuti 316 L, naizvozvo haina kurwisana nengura. Upenyu hwawo hunogona kuva hwokusvika kumakore anopfuura 30 somugumisiro.
LKuona kwakatanhamara uye chitarisiko chikuru.
Simbi isina simbi ferrule mush ine mizaro yechimiro chedhaimani neferrules, kuzviita kuva nomurangariro mukuru nechitarisiko chakanaka. Naizvozvo, rinoshandiswa zvakafara sezvinoita shiri, zvipfeko zvemhuka, zvitoro zvemhuka, zvichingodaro. Uye nhambo yenhumbi yesimbi isina simba inzvimbo huru.
LKuchengeta kusina kuchengetedza uye kwoushamwari hwemhoteredzo.
Hapana zvinhu zvinoshandiswa nechechipinyi mumvura yesimbi isina simba. Nokupfuura nguva, harisati richizoita nengura. Naizvozvo, hapana dikanwo yokuichengeta. Kana yakaiswa, inogona kushandiswa nokusingaperi.
Kugadzira mvura dzokubereka
Mufananidzo wehondo wehondo
Tevere:Mwenzi ine nhonga yesimbi isina simba
Taga: stainless steel ferrule rope mesh, stainless steel ferruled rope mesh, ferrule type cable mesh,
Betsero dzokushandisa mvura ine mvura yesimbi isina manyu
Paunenge uchigara mvura yemberi, ngwariro kumativi anotevera
Kuburuka kwemvura yesimbi isina manyu